Onye chi n'eche na echekwa onwe ya
Home / Column / Onye chi n’eche na echekwa onwe ya
ndiigbokwenu1 June 29, 2016	Column Leave a comment 573 Views
Kedu ka anyị si rute ebe a?
Ụnyaahụ, ihe ọjọọ jọgburu onwe ya mere na Turkey. Ndị dị ka ndị ISIS tụrụ bọmbu na Ataturk Airport dị na Istanbul. Ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ meruru ahu. Anyị kwesịrị imepe anya anyị soro ndị ụwa nile hụ na ọnweghị Obodo ndị ogbu-mmadụ-a kwụnyere.
Ọ bụ ekpere anyị na ụdịrị ihe ọjọọ-a agaghị eme n’Ala-igbo. Mana ka anyị chetakwa na onye chi n’eche na echekwa onwe ya. Ha mere ya na Paris, Brussel, Ọrlando, kita ha emego ya na Istanbul. Ndị ogbu-mmadu gburu ọtụtụ ụmụigbo n’Enugwu steeti n’ọnwa April. Ihe-a gosiri na ha ga emenwu ya n’Ala-igbo ma ọbụrụ na anyị emeghị ihe anyi kwesịrị ịme ka ndị igbo.
Onweghị ebe n’enweghị nsogbu n’ụwa kita. Mana ọbụrụ na anyị achọghị ka ụdịrị ihe-a mere na Istanbul mee na be anyị, anyị kwesịrị ichebe onwe anyị. Ọbụrụ na ị bi na mba ọzọ, ka anya gị dị Ala-igbo, ka anyị jiri ofu obi dozie Ala-igbo ka ọ bụrụ ebe ezinụlọ anyị nile nwere ike ibi n’udo.
Ka anyị mee ngwa-ngwa megharịa ọdachi. Ka ọ bụrụ ebe anyị ga eti ụdịrị iwu anyị chọrọ ma kwado onwe anyị otu ndị nna nna anyi ha si mee mgbe gbuo. Ala-igbo amaka, ka anyị dozie ya ka ọbụrụ ihe ndị ụwa nile ga-eji maara na ndị igbo dị egwu
Previous Enugu Lifestyle And Golf City
Next Flavour ft Zoro & Phyno – Gbo Gan Gbom